प्रदूषणले फोक्सो बिगारिदिन्छ, यी खानेकुरा खाएर जोगाउनुहोस् !! | सुदुरपश्चिम खबर
प्रदूषणले फोक्सो बिगारिदिन्छ, यी खानेकुरा खाएर जोगाउनुहोस् !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : मंसिर ४, २०७८ 75
भिटामिन सी हाम्रो शरीरका लागि निकै आवश्यक छ । यसले शरीरमा फ्रि रेडिकल्सको सफाई गर्छ । शरीरमा भिटामिन–इलाई पुनर् उत्पादन गर्न पनि यो निकै उपयोगी छ । फोक्सोका लागि शरीरमा भिटामिन सीको स्तरलाई कायम राख्न निकै आवश्यक छ । शरीरलाई दैनिक ४० मिलिग्राम भिटामिन सीको आवश्यकता पर्छ । बन्दा गोभी, सलगमको साग भिटामिन सीको राम्रो स्रोत मानिन्छ । कागती, अम्बा, अमला र सुन्तलामा पनि यो भिटामिन पाइन्छ । यसका लागि तपाईंले अमिलो फलको सेवन बढीभन्दा बढी गर्नुपर्छ । रातोपाटी बाट सभार